बुटवललाई नै गिज्याउने सडक - एनसञ्चार अनलाइन || Nsanchar Online
बुटवललाई नै गिज्याउने सडक
भगवती पाण्डे , बुटवल, कात्तिक २५ ।।
बुटवल नआएकाहरूले पनि बुटवल सहरको नाम सुन्दा सुन्दर, सफा र हरियाली सहितको फराकिलो सडकको तस्वीर आँखामा आउने गर्छ।
तर बुटवल बजारभित्रको मुख्य सडकको पछिल्लो अवस्थाले भने बुटवलको पहिचानलाई नै गिज्याइरहेको छ।
वर्षायामभरि भत्किएर खाल्डाखुल्डी परेको हिलाम्मे सडक अहिले भने धुलाम्मे बनेको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलको मुख्य बजारकै सडकको यस्तो दुर्दशाले सडकमा हिँड्ने यात्रुमात्र होइन बुटवलबासीलाई सास्ती बनाएको छ।
बेलहियादेखि राजमार्ग चौराहसम्मको ६ लेन सडक निर्माण गरिएपछि राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाचौकीसम्मको साढे तीन किलोमिटर सडकलाई पनि ६ लेनको बनाउने प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो। सोही अनुरूप २०७४ साल चैत ३० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि सडक छेउछाउका घरधनीहरूको अवरोध र मुद्दामामिलाका कारण सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
तर गत पुस २० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिए पनि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसको कारण बुटवलबासीले धुलो र खाडल सहितको सडकमा हिँड्न सास्ती पाएका छन्।
द कञ्चनजंगा बिरूवा जेभी काठमाडौंले २०७४ सालमा निर्माणको लागि ठेक्का लिँदा २०७६ साल असोज १२ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो।
घरधनीहरूको पटक-पटकको अवरोध र मुद्दामामिलाका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेपछि तेस्रो पटक गरी २०७९ साल असार ३२ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थप गरिए पनि निर्माण कम्पनीले भने लापरबाही गर्दै आएको छ।
गत पुसमा सर्वोच्चले आदेश दिए पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन थियो। पछिल्लो दुई महिनादेखि भने उसले नाला निर्माणको मात्र काम सुरू गरे पनि समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ भने चासो दिएको छैन।
हाल चार लेनमा रहेको सडकलाई स्तरोन्नति गरी ६ लेनको बनाउन कुल ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम सुरू नहुँदै २०७४ सालमै ४ करोड रुपैयाँ रकम लगिसकेको थियो। तर सडकको हालत भने जस्ताको तस्तै!
सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनीले यसअघि छेउछाउको नाली निर्माण गरिएको र चाडपर्वका कारण पछिल्लो समय काम रोकिएको बताउँछन्।
‘निर्माण कम्पनी केही महिना सम्पर्कमा नआए पनि दुई महिना अघिदेखि काम सुरू गरेको छ, अहिले दसैंतिहार र छठ पर्वका कारणले रोकिएको हो, अबको एक हप्ताभित्र काम सुरू नभए एक्सन लिन्छौं,’ मरासिनीले भने।
मरासिनीले ठेकेदार कम्पनीले समयमा निर्माण सुरू नगरेपछि कागज गरेर सम्झौता गरेपछि बल्ल काममा चासो दिएको बताए।
‘थप गरिएको मितिभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै पटक-पटक ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने।
भत्किएको सडकका खाडल पुरिए पनि भदौ दोस्रो साता झरेको ज्योतिनगर पहिरोको लेदोमाटो बसपार्कसम्म नै बगेर आएपछि झनै धुलाम्मे बनेको उनले बताए।
‘सडकमा परेका खाडल वर्षा सकिएपछि पुरे पनि धुलोको समस्या हटाउन सकिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुकाम रहेको बुटवलको यही सडकमा झण्डा हल्लाउँदै प्रदेश सरकारका १७ जना मन्त्री दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्।
संघ, प्रदेश र बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, विकासे अड्डाका दर्जनौं सरकारी गाडी यही सडकमा धुलो उडाउँदै गुड्छन्।
राजमार्ग चौराह र भुड्कीचोकदेखि पुष्पलाल पार्कसम्मको सबभन्दा बढी व्यस्त हुने क्षेत्र सबभन्दा बढी खाडलै खाडल र धुलाम्मे बनेको छ।
ओहोर-दोहोर गर्ने सवारी साधनले उडाएको धुलोले मोटरसाइकल, साइकल र पैदलयात्री सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।
यही सडकको पश्चिमतर्फ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल रहेको छ। पूर्वतर्फ सडकसँगै जोडिएर करिब आधा दर्जन निजी अस्पताल र दर्जनौं क्लिनिक सञ्चालन गरिएका छन्।
आकाश नै ढाकिने गरी उड्ने धुलोले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पनि सास्ती पुगेको छ।
चाडपर्वको बहानामा सडक निर्माणको काम रोकेको निर्माण कम्पनीले धुलोले बुटवल नै ढाकिँदा पनि पानी हालेर धुलो कम गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन।
बुटवल उपमहानगरपालिका पनि सडकको क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै उम्किने गरेको छ। तर पटक-पटक देशभरका नगरपालिकामा उत्कृष्ट बनेको बुटवलका अधिकांश राम्रा कामलाई राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला सम्मको यही सडकले ओझेलमा पारिदिएको छ।
पुष्पलाल पार्कमा व्यापार गर्दै आएका मिलन न्यौपाने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशका विभिन्न स्थानको लागि प्रस्थानबिन्दु रहेको बुटवललाई यही सडकले गिज्याइरहेको बताउँछन्।
‘भित्र जति राम्रा काम गरेको भए पनि बाहिरबाट आएकाहरूले देख्ने भनेको त सडक हो नि, यस्तो सडकमा यात्रा गरेर जानेहरूले बुटवलको कस्तो सन्देश लैजालान्,’ उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अगाडि सडक किनारमा ठेलामा कपडाको व्यापार गर्दै आएका यम बहादुर मगर सडकमा उडेको धुलोले ठेलामा राखेका कपडा धुलैधुलो बन्ने गरेको बताए।
नवजात शिशु र सुत्केरी महिलाको लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा अस्पताल अगाडि बिक्री हुने भए पनि धुलो लागेका कपडाले संक्रमण हुने भन्दै अन्यत्र किन्न जाने गरेको उनले गुनासो गरे।
‘पहिले त राम्रै बिक्री हुन्थ्यो, अहिले चार पाँच महिना यता त बस्ने मात्रै हो, यस्तो धुलैमैलै कपडा लगाइदिए त बच्चा र आमा बिरामी हुन्छन् भन्दै माथितिर किन्न जानुहुन्छ,’ मगरले गुनासो पोखे।
सडकमा उडेको धुलोले व्यापार घटेर खाना बस्न समेत पुग्न छोडेको उनको भनाइ छ।
पाँच वर्ष पहिले सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि सडक मर्मत गर्नेतर्फ डिभिजन सडक कार्यालयले पनि चासो दिएन।
ठाउँ-ठाउँमा खाडल परे पनि लामो समय मर्मत नगरिँदा राजमार्ग चौराह र भुड्कीचोकदेखि पुष्पलाल पार्कसम्मको सडकमा कालोपत्रै सबै उप्किएको छ।
खाडलैखाडल परेको सडकमा गाडी चलाउँदा धुलो उड्ने सास्तीसँगै सवारीसाधन छिटो बिग्रिने गरेको बस चालक बुद्धिबहादुर कुमालले गुनासो गरे।
‘सडक भत्काएर अलपत्र छाड्दा गाडि चलाउन समस्या भएको छ, धुलो र हिलोले सडकको खाडल नदेखिएपछि त्यही खाडलमा गाडी फस्छ,’ उनले भने।
धुलो र खाडैलखाडल परेको सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको उनले बताए।
सडकको यस्तो दुर्दशा भएपछि बुटवलका केही युवाहरूले ‘यो सडक हो कि मान्छे मार्ने धराप ?’ भन्दै पुष्पलाल पार्कमा सांकेतिक रूपमा विरोध गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
‘यो सडक हो कि मान्छे मार्ने धराप? जति दुर्घटना भए पनि छैन सरकारलाई चासो’ लेखिएका ब्यानरसहित युवाहरूको उक्त समूहले प्रदर्शन गरेको थियो।